Jumlada Fumed Silica FST- 150 qiiqa Silica (SiO2) Soo-saaraha iyo Bixiyaha | Fuhsite
Silica macmalaysa waa qayb aad u yar oo leh aag aad u weyn, daahirnimo sare, iyo u janjeeridda inay silsilado ku samayso habka wax -soo -saarka kiimikada. Qurubyada waxaa lagu sameeyaa iyadoo la isku duro chlorosilanes, sida silikoon tetrachloride, ololka hydrogen iyo hawada. Falcelinta hubinta waxay soo saartaa silica qiiqa iyo koloriin hydrogen.
Silica Fumed Caanaha Kiimikada: SiO2
Magaca Kiimikada: Senthetic Amorphous Silicon Dioxide, Crystalline-free
Silica macmacaanka ah ayaa loo adeegsadaa dahaarka iyo codsiyada gelcoat-ka, wuxuuna bixiyaa xakameyn ku habboon rheological, iyada oo la gaarayo khafiifinta xiirida ugu habboon iyo kor u qaadista dalabka adeegsiga dhammaadka.
Silica macmacaanku wuxuu leeyahay laba hawlood oo asaasi ah. Xoojintu waxay kordhisaa xoogga agabyada kala duwan, taas oo u oggolaanaysa in loo adeegsado codsiyo ballaadhan si waafaqsan shuruudaha saxda ah ee isticmaalaha. Xakamaynta cilmiga Rheology -gu waxay u oggolaanaysaa macaamiisha inay ku habboonaan karaan is -beddelka nidaamka baahiyahooda.
Silica macmacaanka ah waxay u adeegtaa sidii wakiil dhumuc weyn oo caalami ah, ka sii dhumuc weyn oo caanaha lagu liso, iyo wakiil ka hortagga cuntada budada ah. Sida jel silica, waxay u adeegtaa sidii qalajiye. Waxaa loo adeegsadaa waxyaalaha la isku qurxiyo ee loogu talagalay guryaha iftiimiya. Waxaa loo isticmaalaa sidii nabar -nuujin, alaabooyinka sida daawada cadayga. Isticmaalka kale waxaa ka mid ah buuxinta elastomer -ka silikooniga iyo hagaajinta dheecaanka ee rinjiyadaha, dahaarka, khadadka daabacaadda, dhejisyada, waxyaabaha la isku qurxiyo, xirxirayaasha, musqulaha, cuntada, cabitaanka iyo marada polyester -ka oo aan la buuxin.
10kg/Boorso; Bacda warqadda cad ee cad,
20 GP -ga waxay ku raran kartaa badeecooyin dhan 2200kg oo leh 10 sariirood, 22 boorsooyin/sariir;
40 GP -ga waxay ku raran kartaa badeecooyin 2400kg ah oo leh sariirta 20, 22kaag /sariirta;
40 HQ waxay ku raran kartaa alaabada 4800kg oo leh sariirta 20, boorsooyinka/sariirta
Silica Fumed Lambarada CAS:
1) CAS No. 112945-52-5 (Gaarka ah)
2) CAS No. 7631-86-9 (Guud)
Hore: Fumed Silica FST- 200 oo loogu talagalay batteriga Saliidda
Xiga: Fumed Silica FST- 150 oo ka timid Fushite oo loogu talagalay dhejisyada iyo dhejiska
Aerosil 200 Silica Fumed
Amorphous Silica Powder Isticmaala
Codsiyada Silica Fumed
Cabitaannada Silica Cabosil
Bakhaarka Guriga ee Silica
Silica Fumed ee La Taaban Karo
Powder Silica Fumed
Isticmaalka Silica Fumed
Hjsil 200 Silica Fumed
Daaweeyey Silica Fumed
Silica Fumed Si Weyn Looga Adeegsado Rinjiyeynta A ...
Hydrophilic Fumed Silica FST-430 Loo Adeegsaday Daabacaad ...
Hydrophilic Fumed Silica FST-200 gra warshadaha ...
Hydrophilic Fumed Silica FST-150 gra warshadaha ...
Silrogen Pyrogenic Silica Fumed
Alaabta Kulul, Khariidadda bogga Amorphous Fumed Silica, Aerosil Fumed Silica, Hydrophilic Fumed Silica, Aerosil 200 Silica Fumed,